Ukufa kwe-Balder kwiNorth Mythology
Wonke umntu ufunga isithuba ngaphandle kweMistletoe
UOdin, ukumkani oothixo baseNorse, wayehlala ehleli eHildskialf, itrone ye-Aesir oothixo [bona uNorse Gods ], kunye namaqabane akhe, amabhinqa amabini, uHugin (ucinga) kunye noMunin (iMemori), ehlekisayo ezindlebeni zakhe. Ukusuka kwesi sikhundla, unokukhangela kuzo zonke ihlabathi ze-9. Ngamanye amaxesha umfazi wakhe uFrigg wayehlala apho, naye, kodwa wayenguye kuphela omnye unkulunkulu onelungelo. UFrigg wayengumfazi wesibini kunye nentandokazi ka-Odin, intombi yakhe eyayiba nayo.
Wayenguye kuphela uAesir onobuqili nolwazi malunga nekamva njenge-Odin, nangona ukukwazi kwakhe kwangaphambili akuzange kuphazamise njengoko kwenzayo umyeni wakhe.
UFrigg wayenendlu yakhe, eyayibizwa ngokuba yiFensalir, apho wayehlala khona ephosa amafu ukuba afike apha eMidgard . I-Fensalir nayo yakhonza njengekhaya lokuphila emva kweentsapho ezitshatileyo ezazifuna ukuba kunye. Kwakungumlingani kwikhaya elidumileyo lamagorha anesibindi, uValhalla, apho u-Odin wayichitha ixesha elide - ukusela (kuthiwa wayeke ukutya xa eva malunga nokubhubha okungenakukugwema kukaRagnarok) kunye nabahlobo bakhe bokutya kunye nokulwa kunye Valkyries.
Owona mnandi oothixo wazalelwa uFrigg no-Odin. Wayebizwa ngokuba nguBalder (owaziwa nangokuthi iBaldur okanye iBaldr). WayenguThixo wenyaniso kunye nokukhanya. U-Balder wayenolwazi ekuphulukeleni imifuno kunye neempembelelo, ezenza ukuba abe ngumthandayo phakathi kwabantu baseMidgard. Umlindi wayehlala kwibhotwe egama linguBreidablik kunye nomkakhe uNanna (nb
kukho nantombikazi waseMesopotami yeli gama), unkulunkulukazi wezityalo. Kwakukholelwa ukuba akukho buxoki obungadlulela kwiindonga zaseBreidablik, kwikhaya loothixo wenyaniso, ngoko xa uBalder eqala ukuba nesibetho sokuphazamiseka kwakhe, abanye oothixo base-Aesir bawathatha ngokungathandekiyo. Ngokungafani noothixo kwamanye ama-pantheon, oothixo baseNorse babengafi.
Baye bakhathaza yonke into enokuthi ibangele ukulimala kwintlupheko, ukusuka kwizixhobo ukuya kwizifo kwizidalwa. Ngoluhlu olusandleni, unina kaBalder, u-Frigg, onikezelwe ukuqinisekiswa ngokuqinisekileyo kwinto yonke kwihlabathi eli-9 ukuba angalimazi uBalder. Oku kwakungekho nzima kuba wayemthanda kakhulu.
Xa wayegqibile umsebenzi wakhe, uFrigg wabuyela eGladsheim, iholo leentlanganiso zezithixo, ukubhiyozela. Emva kweembalo ezimbalwa zeengxube kunye neendwangu, oothixo banquma ukuvavanya ukuhlaselwa kweBalder. Ibhattshulwa elitshitshiweyo kwiBalder likhutshwe ngaphandle kokulimaza i-Balder, ngokuhlonela isifungo sayo. Izixhobo ezinkulu zazisetyenziselwa, kuquka iintonga zeThor kwaye bonke benqaba ukulimaza unkulunkulu.
ULoki waziwa njengonkulunkulu weqhinga. Ngamanye amaxesha wayenobungozi, kodwa wayengenakwenene. Iziqhwala zazingendawo, kodwa uLoki, owayengunyana wesigorha, wayengazange aziwa njalo. Kubonakala sengathi umsebenzi wakhe owenziwe ngumntu wukuba uvuselele izinto xa izinto zihamba kakuhle. Yinto yesenzo seLoki enqwenela ukuyijika xa exelela umdlali ukuba aphule umlenze ngaphambi kokusebenza.
ULoki wayephazamiseka yiyo yonke into efanelekileyo kwaye wagqiba ukwenza okuthile malunga nayo, ngoko ukuguqula njengeh hag endala, waya ku-Frigg ngelixa wayeseFensalir ethatha ikhefu kwimikhosi.
Yintoni eyenzekayo eGladsheim, wambuza. Uthe kwakuyiyobhiyozo likaThixo. U-Loki-efihlakeleyo wabuza ukuba kutheni ke, ngaba abantu bebethela izixhobo kuye? UFrigg wachaza malunga nezithembiso awayezithethileyo. ULoki wayelokhu ebuza imibuzo de ekugqibeleni wabonakalisa ukuba kukho into ayengazange ayibuze ngenxa yokuba wayecinga ukuba yincinci kwaye ingenakwenzeka. Enye into yayiyi-mistletoe.
Ngalo lonke ulwazi ayeludinga, uLoki waya ehlathini ukuze azenzele isebe le-mistletoe. Emva koko wabuyela kwimikhosi yaseGladsheim waza wafuna umzalwana ongaboniyo u-Balder, uHod, unkulunkulu wobumnyama, owayesekhoneni ngenxa yokuba wayengenakujolisa kwaye ngenxa yoko akanako ukuthatha inxaxheba ekuvavanyeni kokunyuswa kweBalder. ULoki watshela uHod ukuba uya kumnceda enze iinjongo aze amnike uHod isiqwenga se-mistletoe esicacileyo esingenacala.
UHodur wayenombulelo waza wamkela umnikelo, ngoko uLoki waqondisa ingalo kaHod. UHod wasungula isebe, elibanjwe iBalder esifubeni. Balder wafa kwangoko. Oothixo bajonge kuHod bambona uLoki eceleni kwakhe. Ngaphambi kokuba benze into, uLoki wabaleka.
Umthendeleko waba ngumlizo kuba isithandwa kakhulu koothixo saswele. U-Odin yedwa wayesazi indlela eyingozi ngayo loo mcimbi kubo bonke, kuba wayesazi ukuba ngokulahleka kokukhanya kunye nenyaniso, ukuphela kwehlabathi, uRagnarok, kwakufuneka kungekudala.
Kwakuye kwenziwa i-pyre yomngcwabo eyayininzi kakhulu oothixo befuna ukucela uncedo lwabaxhamli. Bese bebeka izinto zabo zehlabathi ezixabisekileyo njengezipho kwi-pyre. U-Odin wabeka igolide yakhe yegolide ye-Draupnir. Umfazi we-Balder wawa phantsi enxungukweni e-pyre, ngoko umzimba wakhe wafakwa eceleni kwendoda yakhe.
[ Owona mhle kakhulu nootywayo oothixo, uBalder, unyana kaOdin, wayebulewe ngumzalwana wakhe ongaboniyo ophethe i-misletoe shaft ejoliswe nguLoki. Umfazi we-Balder wayemjoyine emngcwabeni. Emva kokungcwaba kwabo, bebakho kwihlabathi elibizwa ngokuthi iNiflheim. ]
Kuye kwenziwa umzamo wokuvusa i-Balder, kodwa ngenxa yokungalunganga kukaLoki, yahluleka.
Uthikazikazi wokufa, uHel, wathembisa ukuba uBalder wayeya kubuya emhlabeni xa zonke izidalwa eziphilileyo zilalisa iintlungu zeentlungu. Kwakubonakala ngathi yayiza kusebenza, kuba wonke umntu wayemthanda uBalder, kodwa uLoki wahlela ukungafani. ULoki waziguqula ngokwakhe njengoThok giantess. NjengoThok, uLoki wayengenanto ukukhala. Kwaye ke, uBalder wayengenakubuyela ezweni labaphilayo.
U-Balder nomkakhe bahlala eNiflheim.
Omnye unyana ka-Odin, uVali, uvuselele ukufa kweBalder, kodwa kungekhona ngokubuyela eLoki . Kunoko, uVali wambulala umntakwabo, unkulunkulu oyimfama uHod. ULoki, owayebalekele kwindawo yokuqala yokufa kukaBalder eGladhseim, waza wabuya ebonakala egocekile njengeThokessy, wazama ukufikelela kwindawo ephephile ngokuthi aphenduke i-salmon. I-salmon-Loki ifihliwe kwimpompo yamanzi. Kodwa uAesir, owayesazi apho wayekho khona, wazama ukumbamba emnatha. ULoki wayenobulumko kakhulu kuloo nto kwaye wayiwela ilungelo phezu kwenetha. UTro, noko ke, wayekhawuleza ngokukhawuleza ukuba athabathe intlanzi ehambayo ezandleni zakhe. Emva koko u-Loki wayeboshwe emqolombeni eneentlungu ezityhila emzimbeni wakhe, okubangela ukuba athwale intlungu-de kube sekupheleni kwehlabathi eRagnarok. (Bona u- Prometheus ngesohlwayo esifanayo.)
Iingoma zehlabathi-ii-Gods and Heroes , zikaMorgan J. Roberts
I-Greek Mythological Creature Cyclops
IsiGrike uThixo iHayidesi, iNkosi ye-Underworld
Kutheni iHercules yayinokwenziwa kweMisebenzi eyi-12
IHermes - Isela, Inventor, noMthunywa kaThixo
Indlela yeHippocratic and Four Humors
Itheyibhile yamaRoman Equivalents of Gods yamaGrike
Hera - u-Queen of the Gods in Greek Mythology
Ngaba AmaGrike Akholelwa Iingcamango Zabo?
Ungayifaka njani iBritish Open Qualifier
Ixabiso lokunyuka kweZibonelelo
Kutheni i-Molality isetyenzisiwe endaweni yeMolarity?
I-Product Resubility Definition
Imibuzo yoPhulo lwePPP
UBernhard Langer Uhamba njani Ngokuthwala? Akakho
Imidlalo yeCasino Poker
U-Uthman Bin Affan Okwesithathu okhokelwa ngu-Caliph of Guided Caliph of Islam
Ngaba iDayim ngumqhubi?
Imbali yeeNkcubeko eziNyaka eziDumileyo
Ukutshintshwa kweebheyili kunye neeMpawu zoKhuseleko lweeSithuthuthu
Indlela yokudibanisa "I-Adorer" (ukuya ku-Adore)
Ukukhonza kunye neNkonzo
Ukuhlaziywa komkhiqizo: Cooper Zeon RS3-S kunye nee-RS3-A
VBScript - uLwimi loMlawuli weNkqubo - Icandelo 1